Espaina 31 Oktobra 2015
Vao mainka nampirongatra ny tsy fitokisan'ny vahoaka Katalàna ireo hadisoam-pamindra nampalahelo nataon'ny governemanta Espaniola, herinandro mialoha ilay fifidianam-paritra momba ny "fahaleovantena"-n'i Katalonia natao ny 27 Septambra.
Amerika Latina 31 Oktobra 2015
Voaresaka indray ny famonoan'olona noho ny fankahalana sy ny herisetra atao amin'ny vehivavy taorian'ny fahafatesan'ilay mpiadin'ny zon'ny nanova taovam-pananahana iray malaza ao Arzantina.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Oktobra 2015
Eoropa Afovoany & Atsinanana 30 Oktobra 2015
Azia Atsinanana 30 Oktobra 2015
"Tsy asiana Lego amin'ny lisitry ny entana hovidiana amin'ny Krismasy. Mandiso fanantenana ny tsy fanohanana an'i Ai Wei Wei "
Kotatsu sa Korsy? Japoney sa Iraniana izao fomba fanafanana tena izao?
Hita taratra fa manana tekinika mitovy fototra i Japana sy i Iran rehefa amin'ny fampahazoana aina mandritra ny ririnina.